Microstation V8i -Uyisebenzisa njani ilayisensi-iGeofumadas
Yintoni Ngaba nifuna ntoni na?
Microstation V8i -Uyisebenzisa njani ilayisensi
Ngo-Okthobha, 2011 Microstation-Bentley
Eli nqaku libonisa indlela ilayisenisi ye-Microstation V8i isebenze ngayo, kule ngxaki ndiyibonisa i-8.11 version, kodwa ngendlela efanayo isebenza kuyo nayiphi na inkqubo evela kwiinguqulelo ze-8.9 (XM).
Xa uthenge ilayisenisi ye-Microstation V8i, kukho ulwazi oluthe lwafunyanwa kwaye kufuneka lugcinwe ngenyameko kuba kuya kufuneka ngexesha lokuqalisa:
Imveliso ethengiweyo. Oku kubonakala kwindawo ephawulwe Grey
Inombolo yesiriyeli. Oku kwahlukile kwilayisensi nganye ethengiweyo. Yeyona ephawulwe ngombala oluhlaza emfanekisweni nangona ingazange icelwe ngexesha lokusebenza.
Indawo yokukhutshwa. Le url ithunyelwa nguBentley, apho inkqubo inokukhutshelwa khona nangaliphi na ixesha, ephawulwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka emfanekisweni.
Igama lomncedisi. Oku kudla ngokuba yiMveliso.Activation.bentley.com, ephawulwe ngombala obomvu
Isitshixo sokuvula indawo. Iphawulwe ngombala omfusa.
1. Khuphela iMicrostation V8i
Oku kwenziwa nge-url ephawulwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Nabani na onokuyenza ukuba unesi sitshixo, kuba eneneni kuyalingana nokucela ilayisensi yemfundo okanye ukucela i-SelectCD, apho imveliso ifunyanwa ngayo yonke imisebenzi, kodwa evumela kuphela iiseshoni zokusebenza zemizuzu eli-15. Kananjalo apha unokukhuphela i mfuneko I-Microstation i-V8i yile fakeli enezicelo ezifunekayo kunye nezixhobo zofakelo olufanelekileyo.
2. Faka iMicrostation
Oku akufuneki kwisayensi, kuphela ukuba imfuneko yokuqala ifakwe kuqala kunye ne-Microstation V8i program.
3. Sebenzisa iphepha-mvume
Ukuvula iphepha-mvume kufuneka ube nokufikelela kwi-Intanethi, ke kufanele ukuba linyathelo lokuqala lokuzama ukungachithi ixesha lakho. Ngokubanzi, xa ufaka inkqubo engakhange isebenze, iphaneli ibonakala ekuqaleni kunye nenketho yokuyibhalisa.
Xa kungabonakali, kwenziwa kwile:
Izixhobo> Ulawulo lweelayisensi…
Oku kuphakamisa iphaneli ukusuka apho ukhetha khona:
Izixhobo> iwizard yokuvula iphepha mvume
Kule paneli, sikhetha ukhetho ngohlobo lwelayisensi kwimeko yokuba neseva yelayisensi okanye inkonzo YOKHETHO. Kule meko ngeenjongo zesithuba ndibonisa indlela yokwenza ngokukhetha I-NO-SELECT okanye I-Node Umsebenzisi otshiweyo. Emva koko iqhosha lixineke Okulandelayo.
Iphaneli elandelayo iyasibuza ukuba loluphi uhlobo lwelayisensi esinalo. Kule meko, sikhetha «Ndinekhangela lokuqalisa»Kwaye iqhosha licinezelwe Okulandelayo.
Kwiphaneli elandelayo, khetha Igama lomSeva, eyiyo kanye ebonakala ebomvu kumfanekiso wokuqala wenqaku. Ngokubanzi iyafana, kodwa inokutshintsha ekuhambeni kwexesha kwaye kwimeko yam bendinengxaki yokuyisebenzisa njengoko kubonelelwe ngokusebenzisa oonobumba abakhulu embindini, kuye kwafuneka ndisebenzise productactivation.bentley.com. Ngena kwakhona Ukuqalisa Ukhiye, eboniswa ngombala obomvu kumfanekiso wokuqala wenqaku, ngoko sisebenzisa inkinobho Uxhumo loVavanyo ukubona ukuba yonke into ihlelekile kwaye kuphela ukuba i-intanethi ibe neProxy okanye uxhumano olubhaliweyo kufuneka luchaze idatha.
Iphaneli elandelayo ibuza ilizwe apho iphepha-mvume lisebenza khona kwaye emva koko kuvela iphaneli edla ngokuba yeyona inzima: Umba kukuba usibuza ngohlobo lwemveliso, kodwa hayi i-8.11 esiyithathayo kodwa iikhowudi ezimbini ngaphezulu kuxhomekeke Ukukhululwa. Eli nani alibonisi ndawo kwi-invoice okanye kwinkqubo, ke oko kuhlala kubangela ukudideka.
Enye indlela yokufumanisa kukuvula iMicrostation V8i esiyikhuphelileyo kwaye siye kuyo «Uncedo> Malunga»Kwaye siya kubona ikhowudi. Ukwenza uguqulelo olutsha ngokufanayo ukhiye wokuqalisa, kunokwenziwa kuphela ukuba i-SELECT isevisi ihlawulwe.
Xa kusebenze iLenisi KhethaSeries 1, amanani angasetyenziswa
08.11.07.23 okanye enye 08.11.07.97
Emva koko umyalezo woqwalaselo kufuneka uvele kwaye ekugqibeleni kusebenze. Ngamanye amaxesha umyalezo wemposiso ubuya, kodwa uhlala ungumyalezo nje kuba xa ungena kwinkqubo ilayisensi esele ivuliwe iyavela.
Ukukufakazela, sisenza kwakhona Izixhobo> Ulawulo lweelayisensi… kwaye kufuneka sibone iilayisensi zenziwe ekuphumeni, ethi yona ilayisensi isebenze kumatshini othile kwaye iphelelwe lixesha ukwenzela ukuba xa sifuna ukuyisebenzisa kwenye ikhompyuter, fomatha okanye ukhulule ukuphuma. Kwakhona kwi Uncedo> Malunga Uyakwazi ukubona iinkcukacha zelayisenisi ekusebenziseni kunye nomhla wokuphelelwa yisikhathi.
Ukukhuphela Microstation V8i
Post edlulileyo«Ngaphambilini Kmzmaps, iimephu zeGoogle Earth ezibalabala
Post Next Dweba i-polygon ngeebherethi kunye nemida ukusuka kwi-Excel ukuya kwi-MicrostationOkulandelayo »
Iimpendulo ezi-5 "Microstation V8i -Uyisebenzisa kanjani ilayisensi"
nina egeomates uthi:
Eli nqaku liza kucacisa ukuba ilayisenisi ethengiweyo isebenza njani. Ndiyenze ngabom le blur serial, kuba andikwazi ukupapasha serial kule ndawo. I-Microstation ihlawulwe ngesoftware, hayi simahla. Ezo serial kufuneka zifumaneke kwi-invoyisi ethengiswa rhoqo yemveliso okanye intlawulo yomrhumo wenyanga.
awukwazi ukubona i-serial ethi utshilo. Ndifumana phi le serial?
Disemba, 2015 kwi
uyazi malunga nokuhleka kwe-microstation
Idilesi yakho ye email aziyi kupapashwa.
bonkeIikhosi-3D ModelingIikhosi-BIM MEPIikhosi-Ukusebenza kweBIMIikhosi-Ulwakhiwo lweBIMIikhosi-zooRhulumente baseKhayaIikhosi-zeGeospatialIikhosi-LandWorksIikhosi-Imveliso yobomi beMveliso
Ikhosi ye-BIM 4D-isebenzisa i-Navisworks
Siyakwamkela kwimeko ye-Naviworks, isixhobo sokusebenzisana sika-Autodesk, esenzelwe ulawulo lweprojekthi ...
Bona ngakumbi ...
Inkqubo yoBunjineli boLwakhiwo kusetyenziswa uHlaziyo
Isikhokelo soyilo olusebenzayo kunye neModeli yoLwakhiwo loLwakhiwo ejolise kuyilo loyilo. Zoba, uyilo kwaye ubhale ...
Ikhosi yeWeb-GIS enesoftware evulekileyo kunye neArcPy yeArcGIS Pro
I-AulaGEO iveza le khosi ijolise kuphuhliso kunye nokunxibelelana kwedatha yendawo yokuphunyezwa kwe-Intanethi ...
I-real-time traffic yile sayithi
Funda malunga neRadert Aperture Radar (SAR) enemizekelo
Imigangatho evulekileyo yendawo
Yintoni umgama wokulinganisa iisampulu?
Imagazini ye-Geo-Engineering Magazine
Copyright © 2021 nina egeomates
I-3D Civil Specialization - Khangela kamva
Iiyure ezingama-32 zevidiyo- 100% kwi-intanethi
Funda iArcGIS Pro-Kulula
Kulwimi lwakho-100% kwi-intanethi